Blockchain Izindaba 11.06.2018 - Blockchain Izindaba
Blockchain Izindaba 11.06.2018
2 izinkampani ezinkulu ibhasi eBrazil manje ukwamukela Bitcoin
izinkampani zamabhasi ababili Brazilian, Traffic Garcia futhi South Brazil, ayingxenye iqembu GSB baye baba nje izinkampani zokuthutha abagibeli kuqala Brazil ukwamukela cryptocurrency njengoba indlela yokukhokha.
Iqembu ekuqaleni Ukhethe ukusebenzisa Bitcoin kuphela, kodwa uhlela wengeze Litecoin ngo-July.
"Imisebenzi eminingi kwezomnotho kanye yezohwebo ezifudukayo emhlabeni digital, futhi ingxenye umgibeli umgwaqo ezokuthutha alihlukile "kusho iphini likamengameli GSB Iqembu Estefano Boiko Junior.
Lezi zinkampani zokuthutha ukunikela uhambo phakathi kwemizi kanye uhambo yangasese izikole, amakilabhu, izinkampani kanye nokuvakashela.
Indlela yokukhokha entsha itholakala ngokusebenzisa iwebhusayithi izinkampani zamabhasi, nge ukubhuka inthanethi kuphela, kanye ithikithi izothunyelwa imeyili yekhasimende njengoba isiqinisekiso sokukhokha.
500 000 abantu Switzerland uvotela Bitcoin efana uhlelo lwezimali
Umkhankaso ukuba ngokuphelele shift umkhakha wezezimali Switzerland into efana isimiso sezomnotho Bitcoin elahlekelwa ekhangayo izolo - ke wakwazi ukunqoba cishe 500,000 amavoti, emhlabeni 25% alabo okwaxoxwa nabo.
Loluhlelo impikiswano - eyaziwa ngokuthi EnguMbusi Imali Initiative - ubuzobona ngamabhange enqatshelwa ngekhompyutha ukudala imali lapho umboleke angaphezu ezifakwa zabo.
“Cryptocurrency kanye blockchain ingabe ibukeke lapho thina uya. Kungaba ziye zasetshenziswa ngaphansi kohlelo sase uhlongoza,” wathi Emma Dawnay, ilungu lebhodi Momo, iqembu okuyinto ezihlongozwayo EnguMbusi Imali Initiative.
Imali Digital Goes nomthombo nge DasCoin
Kraken Daily Market Umbiko 10.06.2018
$233M adayiswa kuwo wonke ezimakethe namuhla
Blockchain Izindaba 08.06.2018
Thumela Previous:Njalo wesithathu German uyazicabangela cryptocurrencies njengenhlangano utshalomali
Thumela Landelayo:Blockchain Izindaba 12.06.2018
Juni 19, 2018 ngesikhathi 5:26 PM
Septhemba 4, 2018 ngesikhathi 2:10 AM
Septhemba 4, 2018 ngesikhathi 5:05 PM
Septhemba 5, 2018 ngesikhathi 1:46 AM